Mooge/HIBF - Maalinta Lixaad - Isniin 27 Julaay 2009
Maalinta Lixaad - Isniin 27 Julaay 2009
Dhacdada Koowaad: Bandhigga Xarunta Cilmibaadhista, Akhriska iyo Buug Fidinta ee Badda Cas - Waqtiga 09:00 -11:00 - Waxaa daadihin doona Cabdiraxmaan Yuusuf Cartan
Fadhigani wuxu ka koobnaanayaa bandhigyo iyo casharo ay bixinayaan culumo Somali ahi oo ku saabsan kaalinta jaamacadaha, dugsiyada, maktabadaha iyo dawladaha hoose ka qaadan karaan kor u qaadidda dhaqanka wax-akhriska. Casharada waxa bixinaya prof. Xuseen Xasan Guuleed, Dr Xuseen Bulxan, Dr Sacad Cali shire. Waxa ku xigaya doodo mawduuca lagu sii ambaqaadi doono.
Dhacdada labaad: Gabayada Colaadda iyo Nabadda, waxa hagaya Maxamed Baashe Waqtiga 11:00 – 13:00
Dhacdadan waxa lagu qaadaa dhigayaa akhris iyo doodo ku salaysan halabuurka faneed ee suugaanta Soomaaliyeed 200 ee sano ee u danbaysay. Dhacdadan waxa lagu soo bandhigayaa daabacaadda cusub ee Taxanaha Suugaanta Soomaliyeed oo uu tifaftiray Rashiid Sheekh Cabdillahi Gadhweyne uuna af Ingiriisi u tarjumay Dr Martin Orwin. Ururinta xulka gabayaaga waaweyn ee Soomaaliyeed ee taxanaha ku jira waxa ka qayb-qaatay Axmed Aw Geedi iyo Ismaaciil Aw Aadan, waxana daabacay hay’adaha Progressio iyo Redsea-Online. Waxa jiraya qaybo buuggaas ka mid ah oo akhriyayaan qoraayada buuggan ee madasha joogaa. Ka qaybgalayaasha dhacdadan waxa ka mid ah suugaan yahanno, aqoon yahanno iyo xeeldheereyaal ay ka mid yihiin Rashiid Sh Cabdillaahi, Axmed Aw Geedi, Axmed Macalin, Maxamed Xaashi Dhamac Gaarriye iyo Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi.
Dhacdada Saddexaad: Riwaayadda , Waqtiga 1600-1700 - Ha Cabudhinin Garashada”
Mawduuca Bandhig Mooge wuxuu ku furmayaa riwaayad kooban oo uu allifay Maxamed Jaamac Kayd lana magac baxaday “Ha Cabudhinin Garashada” oo sida magaceeda ka muuqda ku saabsan faafreebka, ayna jilayaan fannaaniin ay ka mid yihiin Kinsi Xaaji Aadan, Busi, Faarax iyo qaar kele.
Dhacdada Afraad: Bandhigga iyo waxqabadka Naadiyada Akhriska 17:00-18:00
Naadiyada Akhriska ee dalka ayaa mid kastaa soo bandhigi doonaa taariikhdiisii, waxqabadkiisa iyo waliba hadafkiisa dhaw iyo yoolkiisa dheerba. Naadiga Akhristeyaasha Hargeysa, Maskaxmaal, Halkaraan, Naadiga Akhristeyaasha Berbera, Naadiga Akhristeyaasha “Ismaaciil Mire”, Naadiga Akhristeyaasha Ceerigaabo iyo Naadiga Akhristeyaasha Xikma.
Dhacdada Shanaad: Sidee ku Yagleeli karnaa Bulsho Furfuran oo Isu Dulqaadata? Waxaa daadihinaya Cabdalle Xaaji -Waqtiga: 19:00-21:30
Fadhigani wuxu noqonayaa kii lagu soo gebagebaynayey Bandhig Dhaqameedkan Mooge, waxana lagu gorfaynayaa mawduuca muhiimka ah ee la xidhiidha xorriyadda hal-abuurka iyo kaalinta dhaqanku ka qaadanayo abuuritaanka bulsho dulqaad leh oo furfuran oo dimuqraadi ah. Axmed Aw Jaamac waxa oo hadli doonaa Soomaalidii hore suugaanteedu xoriyad intee leeg bay lahayd? dhaqan dulqaad inteebay ka lahayd? Waxa halkaas doodo ka soo bandhigaya Dr. Sacad Cali Shire, Rashiid Sheekh Cabdullahi, Siciid Jaamac Xuseen, Prof. Daahir Maxamuud Xaddi, Fowsia Hormood. Is waydiintan oo ay ka qayb qaadan doonaan iyana da’yartu waxay tahay sidee ku hanan karnaa bulsho furfuran oo isu dulqaadata, waana maxay kaalinta xorriyadda hal-abuurka iyo dhaqanku? Wax ma ku biirin karaan fanka iyo dhaqanku abuuritaanka dhaqan dulqaad leh? Waxaa dooddan iyana fikraddooda ka dhiibanaya faca soo koraya, Maxamed Osman. Waxaa lagu soo gabogabaynayaa xaflad loo dhan yahay oo ay iskugu imanayaan marti sharaftii kasoo qayb gashay barnaamijka oo dhami, yar iyo wayn, aqoonyahan, halabuur iyo fanaan intaba.